Fanaan Caalami Ah Oo Isagoo Muslim Ah 38-Sano Ka Dib Ku Laabtay Dalka Maraykanka | Hawraar
September 17, 2014 Taariikhda Fanaaniinta Aduunka, Xiisaha/Xulashada No comments
Fanaan Caalami Ah Oo Isagoo Muslim Ah 38-Sano Ka Dib Ku Laabtay Dalka Maraykanka
Fanaanka dunida caanka ka ah ee Cat Stevens, hore loo odhan jiray intaanu muslim imikana loo yaqaano, Yusuf Islam ayaa sideed iyo sodon sanadood ka dib ku laabtay dalka Maraykanka, halkaas oo ay ugu danbaysay sanadkii 1976-dii.
Yusuf Islam oo aad dadku u jeclaayeen heesihiisa, waxa uu ka hadhay fankii qoob ka ciyaarka sanadkii 1977-kii, wakhtigaas oo Illaahay ku hanuuniyay diinta islaamka, waxaanu laga bilaabo wakhtigaas galay, dedaal balaadhan oo uu ku fidinayo diinta Islaamka.
Yusuf Islam ayaa sidoo kale aasaasay urur khayri ah oo lagu tilmaamo kan ugu wayn dunida Islaamka, kaas oo lagu magacaabo, Muslim Aid, waxaanu ka hawl galay taageerada dadka dhibaataysan ee dunida.
Sida wararku sheegayaan waxa uu Yusuf Islam ku laabtay dalka Maraykanka, halkaas oo si wayn loogu soo dhaweeyay, waxaana laga yaaba inuu qabto bandhig faneed wacyi galin iyo taageerada dadka saboolka ah u badan.
Sida wakaladaha wararka dunidu ku warameen waxa la dareemayay hawl xoog leh oo ka socda, xarunta lagu soo bandhigo badhig faneedyada ee Magaalooyinka waaweyn ee dalka Maraykanka, kuwaas oo isku diyaarinaya qabilaada Yusuf Islam, horana loogu magacaabi jiray Cat Stevens.